Bɛn Onyankopɔn Wɔ Mpaebɔ Mu - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Bambara Baoule Basque Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuukese Chuvash Cibemba Costa Rican Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabyle Kalenjin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Wolof Xhosa Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
SƐ WƆDE asase toto amansan kɛse no ho a, asase yɛ ketewa koraa. Nokwarem no, wɔ Yehowa, “ɔsoro ne asase yɛfo no” ani so no, amanaman te sɛ bokiti ho nsukoko a ɛresosɔ. (Dwom 115:15; Yesaia 40:15) Nanso, Bible ka sɛ: “[Yehowa, NW ] bɛn wɔn a wɔfrɛ no nyinaa, wɔn a wɔfrɛ no nokware mu nyinaa. Ɔyɛ nea n’afɛrefo pɛ ma wɔn, na otie wɔn sufrɛ.” (Dwom 145:18, 19) Wode susuw nea ɛno kyerɛ no ho hwɛ! Nneɛma nyinaa Bɔfo no bɛn yɛn, na sɛ ‘yesu frɛ no nokware mu’ a, obetie yɛn. Ɛyɛ hokwan kɛse a yɛanya sɛ yebetumi abɔ Onyankopɔn mpae!
9Hena na ɛsɛ sɛ yɛbɔ no mpae? Yesu kyerɛɛ n’akyidifo sɛ wɔmmɔ ‘yɛn Agya a ɔwɔ soro’ no mpae. (Mateo 6:9) Enti, ɛsɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn nkutoo na yɛbɔ no mpae. Nanso, Yehowa hwehwɛ sɛ yegye ne Ba a ɔwoo no koro, Yesu Kristo, dibea tom. Sɛnea yesuaa ho ade wɔ Ti 5 no, wɔsomaa Yesu baa asase so sɛ ommegye yɛn mfi bɔne ne owu mu. (Yohane 3:16; Romafo 5:12) Ɔne Ɔsɔfo Panyin ne Ɔtemmufo a wɔapaw no. (Yohane 5:22; Hebrifo 6:20) Enti, Kyerɛwnsɛm no ka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfa yɛn mpaebɔ mfa Yesu so. Ɔno ankasa kae sɛ: “Mene kwan no ne nokware no ne nkwa. Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.” (Yohane 14:6) Sɛ wobetie yɛn mpaebɔ a, ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yehowa nkutoo mpae denam ne Ba no so.
10Sɛ yɛrebɔ mpae a, so ɛsɛ sɛ yenya gyinabea soronko bi? Dabi. Yehowa nhwehwɛ sɛ yɛde yɛn nsa begu baabi anaasɛ yenya gyinabea soronko bi. Bible kyerɛkyerɛ sɛ yebetumi abɔ mpae wɔ gyinabea ahorow pii mu ma asɔ Onyankopɔn ani. Yebetumi atra hɔ, yebetumi abɔ yɛn mu ase, yebetumi abu nkotodwe, anaasɛ yɛagyina hɔ abɔ mpae. (1 Beresosɛm 17:16; Nehemia 8:6; Daniel 6:10; Marko 11:25) Ɛnyɛ nea ɛho hia ankasa ne gyinabea soronko bi a afoforo betumi ahu, na mmom koma a ɛfata. Nokwarem no, yebetumi abɔ mpae komm wɔ baabiara a yɛwɔ wɔ yɛn da biara da adeyɛ mu anaasɛ bere a yɛakɔ ahokyere bi mu. Ɛwom sɛ ebetumi aba sɛ nnipa a yɛne wɔn wɔ hɔ no renhu koraa sɛ yɛrebɔ mpae de, nanso Yehowa te mpaebɔ a ɛte saa no.—Nehemia 2:1-6.
11Dɛn na yebetumi abɔ ho mpae? Bible kyerɛkyerɛɛ mu sɛ: ‘Biribiara a yebisa sɛnea Yehowa apɛde te no, otie yɛn.’ (1 Yohane 5:14) Enti yebetumi abɔ biribiara a ɛne Onyankopɔn apɛde hyia ho mpae. So ɛyɛ ne pɛ sɛ yɛbɔ nneɛma a ɛhaw yɛn ho mpae? Yiw, ɛyɛ ne pɛ! Mpae a yɛbɔ Yehowa no te sɛ nea yɛne yɛn adamfo paa bi rekasa. Yebetumi ‘ayi yɛn yam’ ne Onyankopɔn akasa. (Dwom 62:8) Ɛyɛ papa sɛ yebebisa sɛ ɔmma yɛn honhom kronkron, efisɛ ɛbɛboa yɛn ma yɛayɛ nea ɛteɛ. (Luka 11:13) Yebetumi nso abisa akwankyerɛ a yɛde besisi gyinae a ɛfata ne ahoɔden a yɛde begyina nsɛnnennen ano. (Yakobo 1:5) Sɛ yɛyɛ bɔne a, ɛsɛ sɛ yegyina Kristo afɔrebɔ no so bisa bɔne fafiri. (Efesofo 1:3, 7) Nanso, ɛnsɛ sɛ yɛbɔ nneɛma a ɛho hia yɛn ankasa nkutoo ho mpae. Ɛsɛ sɛ yɛtrɛw yɛn mpaebɔ mu ma ɛka nnipa foforo te sɛ yɛn abusuafo ne yɛn mfɛfo asomfo.—Asomafo Nnwuma 12:5; Kolosefo 4:12.
13Ɛsɛ sɛ yɛn mpaebɔ yɛ tenten kodu he? Bible nkyerɛ sɛnea ɛsɛ sɛ yɛn kokoam anaa yɛn baguam mpaebɔ tenten yɛ. Ebetumi ayɛ mpae tiawa a yɛbɔ ansa na yɛadidi, anaa yɛn kokoam mpaebɔ tenten a emu na yehwie anaa yɛka yɛn komam asɛm kyerɛ Yehowa. (1 Samuel 1:12, 15) Nanso, Yesu kasa tiaa nnipa bi a wɔyɛɛ wɔn ho treneefo a wɔbɔɔ mpae atenten de hoahoaa wɔn ho kyerɛɛ afoforo no. (Luka 20:46, 47) Yehowa ani nsɔ mpaebɔ a ɛtete saa. Nea ɛho hia ne sɛ yebefi yɛn komam abɔ mpae. Enti, mpaebɔ a ɛsɔ ani tenten betumi agu ahorow a egyina ahiade ne nsɛm tebea horow so.
14Mpɛn ahe na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpae? Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ, ‘yɛnkɔ so mmɔ mpae,’ ‘yenkura mpaebɔ mu denneennen,’ na ‘yennnyae mpaebɔ da.’ (Mateo 26:41; Romafo 12:12; 1 Tesalonikafo 5:17) Nokwarem no, saa nsɛm yi nkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛbɔ Yehowa mpae bere nyinaa wɔ da mũ no nyinaa. Mmom no, Bible rehyɛ yɛn nkuran sɛ yɛmmɔ mpae daa, yɛnkɔ so nna Yehowa ase wɔ nneɛma pa a wayɛ ama yɛn ho, na yɛnhwehwɛ akwankyerɛ, awerɛkyekye, ne ahoɔden mfi ne nkyɛn. So ɛnyɛ awerɛkyekye sɛ Yehowa nkyerɛ bere tenten anaa mpɛn dodow a yebetumi ne no akasa wɔ mpaebɔ mu no? Sɛ yɛn ani sɔ hokwan a yɛwɔ sɛ yɛbɔ mpae ankasa a, yebenya nneɛma pii a yebegyina so abɔ yɛn soro Agya no mpae.
15Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛka “Amen” wɔ mpaebɔ awiei? Asɛmfua “amen” no kyerɛ “ɛmmra mu,” anaa “ɛnyɛ hɔ.” Kyerɛwnsɛm mu nhwɛso ahorow kyerɛ sɛ ɛfata sɛ yɛka “Amen” wɔ yɛn ankasa kokoam mpaebɔ ne baguam de nyinaa awiei. (1 Beresosɛm 16:36; Dwom 41:13) Sɛ yɛka “Amen” wɔ yɛn mpaebɔ awiei a, yesi so dua sɛ yefi komam na ɛkaa yɛn nsɛm no. Sɛ yɛka “Amen” wɔ yɛn tirim anaa yɛka no kɛse wɔ mpae a obi bɔ wɔ baguam awiei a, yɛkyerɛ sɛ yɛne no yɛ adwene wɔ nsɛm a waka no ho.—1 Korintofo 14:16.